आखिर किन आफु भन्दा पाको पुरूष रोज्छन् यु’ वतीहरु ? यी हुन् मुख्य ६ कारणहरू – Ap Nepal
आखिर किन आफु भन्दा पाको पुरूष रोज्छन् यु’ वतीहरु ? यी हुन् मुख्य ६ कारणहरू
हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला त खोज्छन नै महिलाहरु पनि आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ ।
सुरक्षित: केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै कारण छन् । यसमा मुख्य कारण हो सुरक्षा । पाको उमेरका पुरुषहरु आर्थिकरुपले पनि बलिया हुन्छन् भन्ने विश्वास हुन्छ । उनीहरुमा जीवनको अनुभव पनि धेरै हुन्छ । पाको उमेरका पुरुषसँग महिलाले सुरक्षित महसुस गर्छन् ।
समझदारी: महिलाका भावनात्मक कुरा पाको उमेरका पुरुषले बढी बुझ्छन् भन्ने बुझाइ हुन्छ । महिलाहरुको भावना बुझ्न कम उमेरकाले नसक्ने र उनीहरुलाई तारिफ पनि पाका उमेरका पुरुषले गर्ने हुँदा उनीहरुलाई पाका उमेरका पुरुष चाहिन्छ ।कम उमेरका पुरुषबाट यी कुरा नपाइने हुँदा महिला पाका उमेरका पुरुष छान्छन् ।
ज्ञान: आफ्नो प्रेमी वा पतिले आफूलाई दुनियाँका विभिन्न कुराबारे जानकारी दिएको महिलाहरुलाई मन पर्छ । यस्ता पुरुषमा सही या गलत छुट्टाउन क्षमता हुने पनि महिला ठान्छन् । खासमा महिलाहरु हरेक प्रश्नको जवाफ पति वा प्रेमीले नै देओस भन्ने चाहन्छन् ।
शान्ति महसुस्: साना साना कुरामा पनि आत्तिनु र रिसाइ हाल्ने महिलाको बानी हो । त्यसकारण यस्तो कुरा बुझ्नका लागि र सम्हाल्नका लागि पाका उमेरका पुरुषको खोजीमा महिलाहरु हुन्छन् । आफूलाई मानसिकरुपमा सम्हाल्न सक्ने र ढाडस दिन सक्ने पुरुषलाई पति वा प्रेमी बनाउन महिलाहरु उद्दत हुन्छन् ।
धोका नदिने: कम उमेरका पुरुषको तुलनामा पाका उमेरका पुरुषले धो’का दिने खतरा कम देख्छन् महिलाहरु । खासगरी कम उमेरका पुरुषहरु चंचल हुने र भेटे सम्म अन्य केटीहरुलाई हेरि हाल्ने ड’र महिलामा हुन्छ । उनीहरु चाहन्छन् आफ्नो पति वा प्रेमीले अन्य महिलालाई नहेरोस् ।
अनुभवी: महिलाहरुलाई यस्ता पुरुष चाहिन्छ जो अनुभवी हुन् । जीवनका अनेक अनुभव भएका पुरुष उनीहरुलाई मन पर्छ । उनीहरु चाहन्छन् आफ्नो पार्टनर यस्तो होस् जसमाथि हरेक कुरामा भर गर्न सकियोस् ।
Prevटिक-टकमा भाइरल ज्वाइँ सासू मिडियामा, नाँचेर नै भाइरल सासू-ज्वाइँ भन्दा पत्याउँदैनन् (हेर्नुस् भिडियो कुराकानी)
Nextटिक-टक चलाएर झुपढीबाट ७० लाखको महलसम्म पुगे नेत्र भुसाल- उनलाई सबैले बौलायो भन्थे ( भिडियो सहित)
भुटानबाट आफ्ना आमा बुबालाई ल, खेटेपछी नेपालकै खु; दनाबारी शिबिरमा जन्मिएका थिए किरण, १० वर्षको सानै उमेर देखि नै गाउन थालेका थिए (भिडियो)